Dagaal culus oo hubka noocyada kala duwan la isku adeegsaday oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo dhaawacyo fara badan uu geystay. | JILYAALE_ONLINE
Dagaal culus oo hubka noocyada kala duwan la isku adeegsaday oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo dhaawacyo fara badan uu geystay.
Dagaal xoogan oo caawa ka dhacay nawaaxiga saldhgiga degmada Howl-wadaag ayaa lasheegay in ka badan 35 ruux in ay ku dhaawacmeen madaafiic habow ah oo ku soo dhacay caawa isgoyska Siinaay iyo xaafadda Shirkole ee magaalada Muqdisho.
Sida lasheegay in ka badan 20 ruux ayaa ku dhaawacmay madfac habow ahaa oo ku soo dhacay isgoyska Siinaay caawa saacadu markey aheyd 18:30 salaadii maqrib ka dib, xilli dagaal xoogan uu ka socday wadada isgoyska Howl-wadaag ee magaalada Muqdisho.
Goobjoogaha ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ay jiraan dad ku geeriyooday madfacaasi, laakiin tiradooda aan laxaqiijin karin inta ay yihiin.
Waxaa la xaqiijiyay dhimashada wadaad caan ahaa oo lagu magacaabi jirey Sheekh Cali Digir oo tafsiir ka aqrin jirey masjid yar oo ku yaala Ajibka isgoyska Siinaay oo dhaawac ahaan ugu geeriyooday wadada isagoo loo waday Ispitaalka.
Waxaa jira dhimasho badan oo ka dhashay madaafiicda iyo iska horimaadyadii caawa ka dhacay Muqdisho oo si rasmi ah aan loo sheegi karin sababaha amniga dartood.
Waxaa la sheegay in wadooyinka qaar ay yaalaan dad rayid oo dhaawac ah oo wali aan la qaadin, kuwaasi oo suurto gal ay tahay in ay u geeriyoodaan dhiigbax waayo cidna uma tagi karto hadii ispitaal loo qaadi lahaa oo ladaweyn lahaa.
Sideed qof oo 5 ay isku qoys ahaayeen ayaa ku dhaawacmay labo madfac oo iyagana ku soo dhacay agagaarka Ex Axmed Gureey ee xaafadda Shiirkole ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaa madaafiic ay ku soo dhaceen xaafadaha, Suuq Bacaad, Black Sea iyo Xamar Jadiid oo wali aan la ogeyn qasaaraha ay u geysteen madaafiicdaasi.
Dhinaca kale Waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay caawa agagaarka saldhigga iyo isgoyska Howl-wadaag ee magaalada Muqdisho, iyadoo si weyn loo maqlayay madaafiic iyo rasaasta ka dhacda qoryaha lidka diyaaradaha, Baasuukayaasha, waxaana wali adag in la ogaado qasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi.
Dagaalkaan ayaa bilowday Caawa saacadda markey aheyd 18:05 Pm ayaa socday ku dhowaad 3 saacadood iyo bar oo si xoogan la isku dhaafsanayay rasaas cul culus iyo madaafiicda waaweynba, inkastoo wali la maqlayo rasaas goos goos ah iyo madaafiic la is dhaafsanayo.
Dagaalkan ayaa lasheegay in si aad ah loogu layay Ciidamada Dowladda KMG ah ee kusugnaa saldhigga Degmada Howl-wadaan ee Magaalada Muqdisho.
Dagaalkaan ayaa yimid ka dib markii Ciidamada Muqaawamada Soomaaliya ay weerar ku soo qaadeen saldhigga degmada Howl-wadaag oo fariisin u ahaa ciidamada dowladda KMG Soomaaliya.
← The UN High Commissioner for Refugees has said that more than 400 people are dead or missing since September after trying to make the perilous journey across the Gulf of Aden from Somalia to Yemen.
Dood xoog badan oo xamaasad leh oo maanta ay isweydaarsadeen Xildhibaannada Barlamaanka Kmg ah ee Soomaaliya, kuna dhamaatay natiijo la’aan. →